EX - ABSDF: March 2014
Published on: March 30, 2014 (၁)
ဖြတ်လေးဖြတ် နည်းဗျူဟာနဲ့ ရန်သူကို အပြီးတိုင် ချေမှုန်းမယ်ဆိုတာ
မြင်းလောင်းတဲ့နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေ၀င်း ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့
နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်ကစလို့ ၁၉၈၃ ခုနှစ်အထိ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (BCP)
နဲ့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (ုKNU) ကို ဒီနည်းလမ်းအတိုင်း ချေမှုန်း ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၄- ဧပြီလမှစတင်ပြီး လူဦးရေစာရင်းကောက်ယူတဲ့အခါ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုပြီး သတ် မှတ်ကောက်ယူမည့်အကြောင်းကြားသိရတဲ့အခါ ကျွန်တော် အလွန်ဘဲ စိတ်ပျက်၊ စိတ်ညစ်သွား မိတယ်။အလွန် အန္တရာယ်ကြီးပြီး မဆုံးနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ ဆက်တိုက်ဖြစ် လာနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်စိုးရိမ်ပူပန်မှု့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြပါရစေ၊
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသား ကရင်၊ရှမ်း၊ မွန်၊ ကချင်စတဲ့လူမျိုးများဟာ အိမ်နီးချင်း တရုပ်၊ထိုင်းနိုင် ငံများမှာလဲ ရှိနေပြီး သူတို့နိုင်ငံထဲမှာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်နေကြပါတယ်။ တိုင်းပြည်နယ်နိမိတ် ဆိုတာ ခြံစည်းရိုးမခတ်ခင်က လူသားများ ပြန့်နှံနေထိုင်ကြတဲ့အတွက် အခုလိုရှိနေခြင်းပါ။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်မှာလုံးဝ မရှိဘဲ မြန် မာနိုင်ငံအတွင်းမှာသာ ရှိနေတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ လူမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။
ပျောက်ဆုံးမလေးရှားလေယာဉ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဆက်လက်ရှာဖွေ
ကပစ (၂၅) သိမ်းယူထားသော လယ်မြေများ ပြန်လည်ရရှိရေး တောင်သူ ၁၅၀၀ ကျော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ
သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှု စတင်ပြီ
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ရန် စောသေးကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား
ဒီဘ၀ရောက်မှ..သမတဖြစ်ချင်သေးလားကွယ် သူတို့လိုရာ ကပြ ဇာတ်လမ်းမှ မစသေးခင် ဇာတ်အိမ်ကပြိုပြီး၊ ဇာတ်မသိမ်းခင်ငိုရတယ်၊
Bo K Nyein March 28, 2014 at 7:33pm
အကျင့်ကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောတတ်ကြတယ်။ သခင်စိုးလက်ထက်က တည်းမာ့က်စ်ဝါဒကိုမြန်မာမှုပြုရာမှာလူနားမလည်နိုင်တဲ့ပုတ်လောက်ရှိတဲ့ဧရာမစကားလုံးကြီးနဲ့လူအထင်
ကြီးအောင်ခက်ပဆိုတဲ့ပါဠိ စကားလုံးကြီးတွေကိုဆွဲယူလာကြတယ်။အမှန်တကယ်တော့ဖတ်ရတဲ့သူတွေ လူအများစုလည်းနားလည်ကြတာမဟုတ်ပါဖူး။များများနီတာနဲ့ရဲရဲနီတာသာကွာကြတဲ့ခေတ်မှာမာ့က်စ်က
ဘာပြောတယ် လီနင်ကဘာပြောတယ်၊ စတာလင်ကဘာပြောတယ်ဆိုပြီး ဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့ သာဖြီး စားနေကြတာပါ၊ တကယ်မူရင်းစာတွေဖတ်ပြီးနားလည်ကြတာလူနဲစုလောက်ပဲရှိတာပါ။ အများကတော့
ယောင် ယောင်တွေပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘယ်သူမှဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုတကယ်လက်တွေ့၊ အတွေ့အကြုံ ရှိကြတာမဟုတ်။ စိတ်ကူးနဲ့ရမ်းသန်း (နီ)နေကြတာပါ။
စစ်တွေမြို့တွင် သန်းခေါင်စာရင်းကို သပိတ်မှောက်နေ
ပြည်မြို့တွင် တောင်သူ လယ်သမားများ ဆန္ဒပြတောင်းဆို
ရန်ကုန်မြို့လယ် ရွှေလင်ဗန်းစားသောက်ဆိုင် ဓာတ်ဆီပက်မီးရှို့ သင်္ကြန်တွင်း ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားပါက ချက်ချင်း အရေးယူနိုင်ရန် အထူးတရားရုံးများ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်သွားမည်
မဲဆွယ် စကားလုံး ထက်ပိုသင့်သော အခမဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ
ရန်ကင်း ခေါင်းဖြတ်လူသတ်မှု ဒေသခံ ၅၀၀ ကျော် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်း အပိုင်းအစတချို့ ရှာဖွေရေးလေယာဉ်တွေ့ရှိ Read more »
စိတ်ကျရောဂါဖြင့် သေဆုံးသွားရသော ဆရာဝန်တစ်ယောက်အကြောင်း
ဆရာဝန်တစ်ယောက် တောရွာတွေဖက်ကို အလုပ်ရှာထွက်တယ်။
သဘာဝကျကျတွေးလိုက်တယ်၊ ရွာရှိရင်လူတွေနေကြမယ်၊ လူရှိရင်ဖျားနာသူရှိမယ်၊
ဖျားနာသူရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆရာဝန်တစ်ယောက်အတွက် အလုပ်ရပီ၊ ဘာလိုသေးလဲ၊ အတွေးမမှားဘူး၊ ရွာတစ်ရွာတွေတယ်၊ ထူးထူးခြားခြားရွာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ရွာထဲမှာ သန့်ရှင်းတယ်၊ အနံ့သက်ဆိုးတွေမနံဘူး၊ရေတွင်းတွေလည်းသန့်သန့်ပြန့်ပြန့်မြင်ရတယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏ ထက်ဝက်နီးပါး သွေးတိုးရောဂါ ခံစားနေရဟုဆို
စစ်တွေ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ကြောင့် ရခိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်း နစ်နာ
ကမ်းထောင်းကြီးရွာတွင် သန်းခေါင်စာရင်း ကြိုတင်ကောက်ယူ
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ အပြင်ပဒံကျေးရွာ ဒေသခံများအား ချင်းလီကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းများက ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်
ဂိတ်စောင့် နှင့် ဂိတ်တံခါးမရှိသော ရထားလမ်းကူး၌ ကားနှင့် ရထား တိုက်မှုဖြစ်ပွား
စိတ်ကျေနပ်မှုရဲ့ ဓားစာခံ အိမ်အကူမလေးများ
ယာဉ်ထိန်းရဲ ၀တ်စုံဝတ်ထားသူ ငါးဦး ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ကို တိုက်ခိုက်ဝိုင်းရိုက်
စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည့် မြန်မာအိမ်အကူများ အနိမ့်ဆုံးလစာ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၄၅ဝ ရတော့မည်
အစ်ကိုကြီးရေ.. သတင်းထူးပါတယ်၊ သတင်းထူး" လို့ အော်ပြီး မနက် စောစောကြီး ရောက်လာသူ ကတော့ တပည့်ကျော် မောင်ဆိတ်သိုးပေါ့ ခင်ဗျာ။ ဒါနဲ့"ကဲ ဆိုစမ်းပါဦး၊ မင်းရဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးကို စော်ကားခံရတဲ့ ကိစ္စကြီး။ ငါတို့လူမျိုးက အစော်ကား ခံနေရတာ ကြာပါပြီ"
လေယျာဉ် ပျံသန်းဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေချိန် မြန်မာပြည်ကို ဆင်းသက်ခွင့်တောင်းခဲ့ကြတယ်တဲ့။ ဟဲဟိုးလေဆိပ်မှာ ဆင်းခိုင်းမလို့ဟာကို ဆိုင်ကယ်တွေက များတော့ ဆိုင်ကယ်တိုက်မိမှာကို စိုးတာက တကြောင်း
စစ်တွေမှာ အန်ဂျီအိုရုံးတိုင်းလိုလိုကို လိုက်လံဖျက်ဆီးနေတယ် – မေးမြန်းချက်
နေ့ခင်းဘက် အဝတ်အထည်ရောင်းသူ လည်ပင်း ကြိုးစွပ် ဆွဲကြိုးဖြတ်မှုဖြစ်ပွား
ခရီးသည်တင်ယာဉ် အရှိန်လွန်တိမ်းမှောက်ခဲ့၍ (၂၄)ဦးဒဏ်ရာရ
ရေမျော အပိုင်းအစ ၃၀ဝ ထိုင်း ဂြိုဟ်တု တွေ့ရှိ
စစ်တွေမြို့တွင် လူစုဝေးမှုများတားဆီးနိုင်ရေးအတွက် ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ပြန်မည်
စစ်တွေရှိ NGOs များမှ နိုင်ငံခြားသားများကို လုံခြုံရာသို့ ခေါ်ထုတ်သွားပြီ
ကျားဖြူ SNDP ၏ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦး ပါတီ မှ နှုတ်ထွက်
ပျောက်ဆုံးသူ ဆေးကျောင်းသားကို သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိ
- စိတ်အ၀င်စားဆုံးယဉ်ကျေးမှုက ဂရိ အင်ပါယာမို့ ဂရိတွေအကြောင်း ရှာဖွေကြည့်မိတယ်..။ အေသင်ရဲ့ တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီနဲ့ စပါတန်တို့ ရဲ့ လူနေမှုဘ၀ အကြောင်းက တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်...။ - အေသင်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီမှာ နိုင်ငံသားတိုင်း (full citizen) ဟာ တိုင်းပြည်ရေးရာတွေမှာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခွင့်အပြည့်ရှိပြီး။ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းက အာဏာ မောင်ပိုင်စီးသွားမှာ အာဏာရှင်စံနစ်ကို ဦးတည်သွားမှာကို ကာကွယ်ကြသတဲ့..။
Bo K Nyein March 24, 2014 at 6:32pm
မဆလ..ခေတ်ကိုမမှီလိုက်ကြတဲ့ လူငယလေးတွေကို သိစေချင်တာက....
မြန်မာနိုင်ငံကို (စ) တင်ဖျက်စီးသွားတဲု့သူတွေကို သိထားစေချင်တယ်
စစ်အာဏ်ရှင်စနစ်ထောင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကို (စ) ဖျက်သွားတာက...... ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း
စီးပွားရေးကို ဖျက်စီးသွားတာက မာ့က်စစ် ဦးဘငြိမ်
ပညာရေးကိုဖျက်စီးသွားတာက ဒေါက်တာညီညီ တပ်ဦးကျောင်းသားဟောင်း
ခုမတ်လဆန်းမှာ အမေရိကန်ပြန် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းတဦးက လွဲမှားစွာ အလွပ်ကျက်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရေးပညာရေးနိမ့်ကျလာတယ်လို့ ဆိုမိန့်လာတဲ့အတွက်၊ ထင် ယောင်ထင်မှားဖြစ်စရာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ထို့အတွက်၊အများအနေနဲ့ အမြင်ရှင်းရအောင် ဤဆောင်းကိုရေး ရသည်ပါ။
မြန်မာ့ရိုးရာ အမွေအနှစ်ဓလေ့များကို မှတ်ပုံတင်နိုင်တော့မည်
အမွေအနှစ်နှင့် ရိုးရာဓလေ့များတွင်အပါအဝင်ဖြစ်သော အင်းသားများ၏ လှေကိုခြေဖြင့်လှော်သည့် ရိုးရာဓလေ့ကို အင်းသားများဆုံစည်းရာနေ့တွင် တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ − ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ)
အနှစ်ဓလေ့များဖြစ်သည့် ဆိုင်း ၀ိုင်း၊ Read more »
၈၈မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်များကို ပုဒ်မ၁၈ဖြင့် ပခုက္ကူရဲစခန်းမှ အမှုဖွင့်ခံရ
အရက်မူးလွန်နေသော အမျိုးသားတစ်ဦး (၆)လွှာတိုက်ခန်းမှ ခုန်ချသဖြင့် သေဆုံး
ဘူးသီးတောင်မောင်တော ခွဲထွက်ရေး ရေးသားချက် လူထောင်ချီ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံရုံးရှေ့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ
မြောက်ကိုရီးယားက တောင်ကိုရီးယားနှင့်ဂျပန်ကို ဒုံးကျည် စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်
Shin Thant May Myinttarshinmalay's photo.
မေမေ ကမ္ဘာကြီးဆိုတာ ရွာကြီးတစ်ရွာတဲ့လား Read more »
သိသင့်သမျှ သိကြပါစေ ကွန်ဆူး မား
ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလ၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး အကြိုကာလတွင် လှုပ်ရှားမှုများ စတင်လာကြပါပြီ။
ထိုလှုပ်ရှားမှုများတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတော်အတွက် ဟူသော ဟစ်ကြွေးသံများ စီစီညံနေပါသည်။ ပြည်သူများလည်း မျှော်လင့်နေကြပါသည်။
ပေါ့ဆမီးကြောင့် မယ်လစခန်း အိမ်ခြေ ၅၀ ပျက်စီးကြောင်း ထပ်မံအတည်ပြု
ငိုသံတွေနဲ့ ပီကင်းမြို့ရှိ မလေးရှားသံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြပွဲ
သစ်ဆိုင်ရှေ့ ဖုန်းရပ်ပြောနေသူများနှင့် သစ်စက်အလုပ်သမားများ စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ (၁)ဦးသေ (၅)ဦးဒဏ်ရာရ
ထိုင်းတွင် ခရီးသည်တင်ယာဉ် ချောက်ထဲကျ၊ အယောက် ၃၀ သေဆုံး
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လူထုဆန္ဒပြပွဲ မကွေးတွင် ဆင်နွဲ
သမိုင်း၏ လစ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရခြင်း နောက်ကွယ်မှာ ဦးနေ၀င်း ပါဝင်ပတ်သက်နေသလား
shared Eleven Media Group's photo.
တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲဆွဲချပြီး စနစ်ဆိုးကို လက်ဆင့်ကမ်း အမွေပေးခဲ့သူတွေ၊ သူတို့နဲ့ ဆက်နွှယ်သူတွေက ဒီအချိန်မှာ တစ်ကျော့ပြန်ခေါင်းထောင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ပြည်သူလူထုက သူတို့ရဲ့ ဆိုးမွေးတွေကို အခုချိန်ထိ ခါးစည်းခံနေ ကြရတုန်းပါ။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ ဒုက္ခတရားတွေက ပြည်သူလူထုကို ဖိစီးထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သဘောတရားရေးဆရာ ကြီး ( Aristotal 384 BCE – 322 BCE) က Democracy is
when the indigent, and not the men of property, are the rulers. Inademocracy the poor will have more power than the rich, because there are
more of them, and the will of the majority is supreme. Inferiors revolt in order that they may be equal, and equals that they may be superior. Such is the state of mind which creates revolutions. ဘာသာ ပြန်ခြင်သလိုသာ ပြန်ကြပေ တော. အဓိပါယ် ဖေါ်ခြင်သလိုသာ ဖေါ်ကြပေတော့။ Read more »
ရခိုင်ပြည်နယ် သန်းခေါင် စာရင်း ကောက်ယူရာ တွင် ပြည်နယ် လုံခြုံရေး အင်အား အကုန်သုံးမည်
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ အား၂၀၁၅ ခုနှစ် အကြိုပွဲ ဟု သတ်မှတ်၍ NLD ပါတီ အစွမ်းကုန် ယှဉ်ပြိုင်မည်
ပထမဆုံး နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ထားမည်
သံသယရှိဖွယ်အပိုင်းအစတွေကို တရုတ်လေယာဉ်ပေါ်ကနေ ထပ်တွေ့
စဉ့်ကိုင် သစ်အချောထည်စက်ရုံလုပ်သား ၁၀၀၀ ကျော်ဆန္ဒပြ
မှတ်ပုံတင်မဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ် များကို ဇွန်လကုန်အထိ ဖမ်းဆီးဦးမည် မဟုတ်ကြောင်း သိရ
ဝက်နားရွက်ပြာ ရောဂါချိန် နီးကပ်လာပြီ ဖြစ်၍ ဝက်များ ကြိုတင်ရောင်းချ
အိမ်ဖော်ကိုနှိပ်စက်ခဲ့အိမ်ရှင်အား ပုဒ်မ၃ခုနဲ့ အမှုဖွင့် ပျံလွန်တော်မူတာ နှစ်၃၀ကြာ သံဃာတော် ရုပ်ကလာပ် မိခင်ကို စိတ်ကောက်ပြီး သမီးဖြစ်သူ ကြိုးဆွဲချသေဆုံး
ဘာပဲပြောပြော လက်ရှိအနေနဲ့ မန္တလေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တယ်။ စီးပွားရေးအရရော၊ ယဉ်ကျေးမှုအရရော အချက်အချာကျတယ်ဆိုတာလည်း မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အချက်အချာကျတဲ့ စီးပွားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုမှာ မကြာခင် ကုန်းကောက်စရာမရှိတော့အောင် ချွတ်ခြုံ ကျတော့မယ် ဆိုတာလည်း အသေအချာပါပဲ။ Read more »
မြိုင်မြို့နယ် အတွင်းရှိ တဲကြီး ကျေးရွာ တွင် သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ် မှုများ ဖြစ်ပေါ်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သတင်းဌာန ဖော်ပြချက် မြန်မာအချုပ်အခြာကို ထိပါးခြင်းဟုဆို
နေပြည်တော်-ရန်ကုန် အမြန်လမ်းမကြီးတွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွား (ရုပ်/သံ)
တောမီးလောင်ရာမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် မီးခိုးများကြောင့် ကျိုင်းတုံ လေယာဉ် မဆင်းနိုင်
လိင်အပျော် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကျိန်စာ တိုင်းပြည်ရဲ့အနုတ်လက္ခဏာပြ ကြော်ငြာသာဓကတစ်ခု
နိုင်ငံခြားသားများအား ဒေသခံများနှင့်အတူနေထိုင်သည့် Home Stay ခွင့်မပြုသေး
ဒီမိုကရေစီရဲ့ စံနှုန်းစံထားနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြုပြင်ရန်လိုဟု ဒေါ်စု ပြော
လှည်းကူးမြို့နယ် ကျေးရွာနှစ်ရွာကို စစ်တပ်ကအဓမ္မပြောင်းရွှေ့ (ရုပ်/သံ)
မလေးရှားလေယာဉ် အစိတ်အပိုင်းဟု ယူဆရသောပစ္စည်းများ ရေမြှုပ်ဟု သြစတြေးလျပြော
စစ်တွေနှင့် မောင်တောကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲ ထည့်ရန် ရေးသားမှု မြန်မာအစိုးရ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်
ပုံတစ်ပုံကြောင့် ဘ၀ပြောင်းသွားတဲ့ အာကာကျော် နိုင်ငံတကာပွဲ သွားမည်
ဖရီးမောင့်မြန်မာတဦး ကလေးသူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကာယအိနြေ္ဒထိခိုက်စေသော ဓာတ်ပုံရုပ်သံများ တက်ဆက်သည့်အမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရ
ကျာင်းသားသမဂ္ဂများ ထားရှိရေးအဆို လွှတ်တော်မှာ ရှုံးနိမ့်
Htay Aung shared Kyaw Swar Myint's photo.
အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေကြမ်းထဲမှာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေ ပြန်လည်ထားရှိဖို့
အတွက် ထည့်သွင်းရေးဆွဲပေးဖို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွှန့်က ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ အဆိုတင်သွင်းခဲ့ရာမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ ၊ ၂၇ ရက်နေ့ဘယ်လိုဖြစ်လာပါသလဲ။
Thaung Tan Cho shared Aungmyo Tun's photo.
မေးခွန်း ၁။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ ၊ ၂၇ ရက်နေ့ဘယ်လိုဖြစ်လာပါသလဲ။
ဖြေ။ တော်လှန်ရေးနေ့ ကို မတ်လ၊ ၂၇ ရက်နေ့ မှာ သတ်မှတ်ဖို့ 
ဆုံးဖြတ်လိုက်သူများဟာ ဗမာပြည် တိုင်း (၄) ရဲ့စစ်ကော်မတီဝင်တွေပါ။ ကျွန်တော် မှတ်မိသလောက်တော့ သခင်ချစ်၊ ဗိုလ်သိန်းဒန်၊ သခင်ဗတင်၊ ဗိုလ်အောင်ရွှေ (ယခု NLD ဥက္ကဌ) နှင့် ကျွန်တော်တို့ ပါဘဲ။
ကျုံပျော်မှာ စွပ်စွဲခံရသူတွေ ပြင်းထန်တဲ့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ ခံရ (ရုပ်/သံ)
ဟားခါးမြို့နယ် လေယာဉ်ပျက်ကျသတင်း အာဏာပိုင်များ စုံစမ်းဆဲ
မန္တလေးမြို့ လမ်း ၆၀ရှိ X Café ဆိုင်ရှေ့ တွင် အုပ်စု ဖွဲ့ ရိုက်နှက် မှုဖြစ်ပွား
ဧပြီ ၁ ရက်ကစပြီး ၀န်ထမ်းလစာ ကျပ် ၂ သောင်း တပြေးညီတိုးမည်
လူကုန်ကူးမှုဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို မဖမ်းဘဲ လွှတ်ပေးထား
၂၀၁၅ တွင် အာဏာရကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အရေးနိမ့်မည်စိုး၍ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် တံဆိပ်နှင့်အလံများ ပြောင်းမည်မဟုတ်
အိမ်အကူ မိန်းကလေးကို လူမဆန်စွာ ရေနွေးပူဖြင့်လောင်း အခန်းတံခါးပိတ်နှိပ်စက်မှုကြောင့် ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်
ဓားဖြင့် ရက်စက်စွာ ခုတ်ပိုင်းသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည့် ရန်ကင်းလူသတ်မှု တစ်ဘက်သတ် ခံရခြင်းဖြစ်ဟုသိရ
စာမေးပွဲကပြန်လာသူ ကျောင်းသူတဦး ၆ဘီးယာဉ်နဲ့ ပွတ်တိုက်မိပြီး သေဆုံး
ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ တရားမ၀င်ဟု ကြေညာ
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး ဒဿမအကြိမ်ညီလာခံ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
March 19, 2014 at 4:10am
ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ကျောင်းသားတပ်မတော်)၏ ဒဿမအကြိမ် ညီလာခံကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၇ ရက်မှ ၁၅ ရက်နေ့ထိ မကဒတ ဗဟိုဌာနချုပ်
(ဒေါင်းတမန်) စခန်းတွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ ခဲ့သည်။ Read more »
Burma Marxist Learner's photo.
ကြည့်ပြီး ကျော်မသွားစေချင်ဘူး။ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်စေချင်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်အတွက် တန်ဖိုး တစ်စုံတရာ ဖြစ်စေနိုင်လို့ပဲ။
အဆုံးထိဖတ်တဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်ဟာ မာ့က်စ်ရဲ့ မူရင်းကျမ်းတွေ အားလုံးကို ဖတ်ဖို့ သတ္တိရှိလာလိမ့်မယ်။ ဖတ်ပြီးရင်လည်း ကျွန်တော့်ထက် ပိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ Read more »
သိန္နီ-ကွန်လုံကားလမ်းချဲ့၊ ရွာသားများ နေအိမ်ခြံဝင်း ထပ်မံဖျက်ပစ်ရ
တရုတ်(တိုင်ပေ) လွှတ်တော်ကို ဆန္ဒပြသမားများသိမ်းပိုက်
လစ်လပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃၁နေရာအတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ကျင်းပမည်
စစ်တပ်မှ ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦး၏ ထိုးနှက်မှုကို မကျေနပ်၍ ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တိုင်စာပို့
ရှန်ဟိုင်းတွင် ဇနီးမယားအဖြစ် ရောင်းစားခံရသူ မိခင်ထံ ဖုန်းဆက် အကူအညီတောင်း
တိုက်ကြီး လူသတ်တရားခံတွေ တွေ့ ရင် သတင်းပေးဖို့ ရဲတပ်ဖွဲ မေတ္တာရပ်ခံ
လွန်းတင်ရန်ဆွဲလာသော ငါးဖမ်းစက်လှေနှင့် မီးပြကျောက်တိုင်ငြိပြီး တိမ်းစောင်းနစ်မြုပ်
မတ်လ(၂၂)ရက်နေ့ ထုတ် Netguide ( Vol-3, Issue-28 )
မတ်လ(၂၁)ရက်နေ့ ထုတ် Auto World Vol-3, Issue-13 မတ်လ(၁၉)ရက်နေ့ ထုတ် 7Day News ဂျာနယ် အတွဲ ၁၃၊ အမှတ် ၃
မတ်လ(၁၈)ရက်နေ့ ထုတ် ကုမုဒြာဂျာနယ် အတွဲ(၃) အမှတ်(၅၀)
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ၂၀၁၅-၁၆ တွင် ကော်ပိုရေးရှင်း ပြောင်းမည်
ရုရှား-ယူကရိန်း ခရိုင်းမီးယားအရေးပြီးတော့ မြန်မာ-တရုတ် ‘၀’ အရေးလား
လင်း သက် shared Eleven Media Group's photo.
ခရိုင်းမီးယားအရေးပြီးတော့ မြန်မာ-တရုတ် ‘၀’ အရေးလား၊ ကျောက်ဖြူ-ကူမင်း အမြန်ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်း အပါအ၀င် တရုတ်၏ မဟာဗျူဟာ လမ်းကြောင်းများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာ